Ọjọọ 2 Ọjọọ: Mkpochapu na-ebute gị tupu nlanarị n'ime ụwa mepere emepe | Gam akporosis
Ọjọọ 2 Ọjọọ: Mkpocha bụ egwuregwu lanarị ọhụrụ nke na-eme August na Playlọ Ahịa Google. A post-apocalyptic aha na-ewe gị ka ụwa mepere emepe nke ị ga-emecha ọrụ niile ma meghee ihe odide ọhụụ iji mee ka ihe niile dị mfe.
A aha na na-eji 2D, ọ bụ ezie na Ndahie na anyị pụrụ ịhụ na Arcade utu aha nke gara aga ka Ugboro abụọ dragọn na ndị ọzọ. Egwuregwu nke nwere ike iju gị anya n'ihi akụkụ ahụ nke nlanarị nke anyị ga - emeziwanye ngwá agha ma mepụta ike ọgụ kachasị iji gaa n'ihu.
1 Difficultwa siri ike nke ịchọrọ maka ndụ
2 Nweta nkwalite ngwá agha na Bad 2 Bad: mkpochapu
3 Nnukwu ụwa mepere emepe na ekwentị mkpanaaka gị
Difficultwa siri ike nke ịchọrọ maka ndụ
Na Ihe Ọjọọ 2 Ọjọọ: Mkpochapu anyị ga-eme mara ka esi egwu kaadi anyi tupu freemium na nke na-akwụ ụgwọ anyị ga-enweta a mma agwa. N'ọnọdụ ọ bụla, ya na ọsụsọ anyị ga-enwe ike ịga n'ihu nke ọma ịhapụ ịhapụ euro na aha kwesịrị ya.
Ihe kachasị adọrọ mmasị bụ ụwa mepere emepe yana anyị -enye ohere dị iche iche ọzọ dị ka anyị nwere mmasị. Agha ga-emeziwanye ma chọọ maka ohere ịchọta ndị ọzọ nke anyị nwere ike iwepụ ọtụtụ ndị iro. Ma ọ gaghị abụ ihe dị mfe, ebe ọ bụ na anyị ga-achọ loot iji chọta ihe ndị ahụ na ọnụ ọgụgụ ka mma ma na-enye anyị ohere ikpochapụ onye iro ahụ.
Na mkpokọta anyị nwere ihe karịrị mkpụrụedemede 20 ka ị kpọghee, ọ bụ ezie na ihe e kwuru, ụfọdụ na-akwụ ụgwọ. N'ịbụ onye na-emeghe ụwa, ọ pụtara na ị nwere ike ịmegharị egwuregwu ahụ iji gbalịa ịkwakọrọ ihe dị mma. Inweta ihe kacha mma dị mkpa karịa ihe dị mkpa, ebe ọ bụ na ọnụ ọgụgụ omume anyị dabere na akụrụngwa anyị na-ebu.
Nweta nkwalite ngwá agha na Bad 2 Bad: mkpochapu
Ọ dị mkpa ka anyị were tụlee ngwa agha. Ọ bụghị naanị mmebi ọ nwere ike ime na ogbugba ọ bụla, mana ọ bụ onwe ya na ọrụ ya. Anyị ga-achọta nguzozi kachasị mma n’etiti ọnụ ọgụgụ dị iche iche nke ngwa ọgụ ahụ ji nwayọ wepu ndị ahụ, ọ bụ ezie na ha dị oke mma, anaghị ekwe ka anyị nwee ọganiihu.
Anyị na-ekwu ya n'ihi e nwere ihe karịrị 60 ihe dabeere na ngwá agha na ihe agha nke ndụ n'ezie. Ya mere ọ bụrụ na ị ga-enwe ihe agha kachasị mma, lee, ị ga-enwe nnukwu oge. Anyị ga-agụta na, ewezuga ụwa mepere emepe nwere isi ọrụ, anyị nwekwara ọtụtụ ọrụ nke abụọ na-egosi enweghị usoro. Nke a na-enye oge ahụ n’amaghị na anyị nwere ike ịtụ anya na ọ ga-adị mma.
Anyị nwekwara ike ịgụnye ndị agha na otu anyị ka ihe niile dịrị mfe. Anyi adighi eleghara "egwu" nke egwuru-egwu nke ahụ na-akpọrọ anyị n’azụ. Ngụkọta nke ikike 5: zombies, Thoroughbreds, Losers, Amazons na Legion of Tailless. Ndị agha ndị a ga-enwe ọghọm na adịghị ike ha ka ị jiri wee baara gị uru.
Nnukwu ụwa mepere emepe na ekwentị mkpanaaka gị
Nwere ike irite uru na ụfọdụ enyemaka na ọgụ. Anyị na-ekwu maka crossfire na drone na-ada, DRL-6L. Anyị ga-enwe ụgbọ mmiri ọzọ, mana ọ gaghị abụ maka ọgụ, mana maka nkwado. Yabụ na etolitere egwuregwu na-atọ ụtọ karịa na anyị nwere ike igwu egwu ụbọchị ole na ole mgbe anyị malitere njem ha na ụwa fọrọ nke nta ka ọ laa.
Teknụzụ ọ bụghị na ọ kachasị nke kachasị, mana ọ na-emezu ọtụtụ ogige. Ihe dị mkpa gbasara Bad 2 Bad: Nwepu bụ ahụmahụ ọ na site na ya eserese, imewe nke odide ya (nke dị mma) na ngwa ọgụ ndị ahụ anyị ga - amata otu esi eji ha. Mmegharị ahụ dị na 2D na gburugburu dị mma nke ọma iji mepụta ọnọdụ zuru oke. Eziokwu bụ na ha emezuola ya n'ime mmadụ iri ebe a.
Ọjọọ Abụọ Ọjọọ: inkpochapu ọkụ ọkụ dị na otu nke kacha mma na-emeghe ụwa egwuregwu na anyị nwere na anyị gam akporo mobile. O nwere ikike iji aka gị wepụta ozi ị masịrị gị ma ị nwere ya n'efu na ụdị freemium ahụ ndị na-eme ya nwere. Anyị na-akwado ka ị nye ya a Peek n'ime ụwa mepere emepe nke Retro City Rampage XD.
Ihe ojoo 2 ojoo: Mwepu
Onye edemede: 61%
Ihe eserese 2D gị
Dị iche iche random ihe na ọgaranya ahụmahụ
Otutu ihe agha
Lezienụ maka odide
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Egwuregwu gam akporo » Na-emikpu onwe gị na ahụmahụ post-apocalyptic nke Bad 2 Bad: mkpochapu
Mediatek ga-ebido mmepụta nke 5G chipset ya na nkeji iri na ise nke 2020